Su'aalaha la Weydiiyo - AfricArXiv
Waa maxay AfrikaArxiv?
AfrikArxiv waa il furan oo bilaash ah iyo kayd dhijitaal ah oo ay bulshadu hogaaminayso oo loogu talagalay cilmi baarista Afrika. Waxaan siinaa goob aan faa'iido doon ahayn oo saynisyahano Afrikaan ah si ay ugu dhejiyaan waraaqahooda shaqada, qoraallada hore, qoraal-gacmeedyada la aqbalay (daabacadaha dambe), iyo waraaqaha la daabacay. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AfrikaArxiv halkan: https://info.africarxiv.org/about
Yaa AfrikaArxiv loogu talagalay?
AfricArxiv waxaa loogu talagalay saynisyahano Afrikaan ah oo ka socda dhammaan qaybaha si ay u wadaagaan wax soo saarkooda cilmi-baarista, oo ay ku jiraan preprints, postprints, code iyo xogta.
Maxaynu ugu baahanahay kayd hore oo Afrika u gaar ah?
Waxaan u baahannahay kayd daabacaad gaar ah oo Afrika u gaar ah:
In cilmi-baarista Afrika ay noqoto mid muuqata
Faafin aqoonta Afrikaanka
U oggolow is-weydaarsiga cilmi-baarista gudaha qaaradda
Iskaashi iskaashi ah oo ka kala gudbaya qaaradaha
Kaydka daabicista ayaa aad iyo aad u badan oo loo isticmaalo macnaha guud ee Sayniska Furan waxayna ka kooban yihiin mid ka mid ah tallaabooyinka sahlan oo aadka waxtarka leh si loo helo wax soo saarka cilmi-baarista. Soo gudbinta waxaa dhexdhexaadinaya saynisyahano si ay u jirto nidaam dib-u-eegis asaaga ah oo ku lug leh - haddana way ka duwan tahay in lagu daabaco joornaal la isku faca ah. Inta badan tani wali waa suurtogal ka dib marka loo gudbiyo kaydka preprint.
Sidee AfrikaArxiv uga duwan tahay meelaha kale ee soo socda?
AfricArxiv waxaan rabnaa inaan bixino goob ay saynisyahano Afrikaan ah u daabacaan wax soo saarkooda cilmi-baaris isla markiiba oo bilaash ah. Habkaas waxay ku heli karaan jawaab celin ku saabsan shaqadooda, sii wanaajin karaan waxayna sidoo kale aqoonsan karaan la-hawlgalayaasha iskaashiga mashaariicda mustaqbalka. Daabacaad horudhac ah ayaa u kobcaysa si ay u noqoto qayb muhiim ah oo ka mid ah Sayniska Furan. Si loo helo kayd gaar ah oo u gaar ah bulshada cilmi-baarista Afrika waxay sidoo kale kicin kartaa cilmi-baaris dhex-dhexaad ah oo si gaar ah uga hadlaysa arrimaha Afrika.
Waxaan rajeyneynaa in ay siin doonto saynisyahanada Afrika muuqaal caalami ah iyo sidoo kale in badan oo ka mid ah iskaashiga cilmi baarista ee Afrika. Saynisku wuxuu ka kooban yahay qaybo badan oo kala duwan oo leh kooxo cilmi-baariseed oo ku baahsan adduunka oo dhan. Dhisidda bulshooyinka culuumtan iyo sidoo kale kuwo gaar u ah gobollada qaarkood waxay u oggolaanaysaa saynisyahannada iyo daneeyayaasha kale (siyaasad sameeyayaasha, ganacsatada, shaqaalaha caafimaadka, beeralayda, saxafiyiinta) inay si xeeladaysan u helaan natiijooyinka cilmi-baarista ee danahooda.
Waa maxay caqabadaha ay la kulmaan saynisyahannada Afrikaanka ah?
Muuqaal hoose oo caalami ah
Maalgelinta cilmi-baarista xaddidan
Cilmi-baarayaasha Afrikaanka ah waxay u muuqdaan kuwo aan ku dhex milmin shabakadaha cilmi-baarista caalamiga ah
Sidee bay saynisyahannada Afrika uga faa'iidaysan doonaan?
Muuqaal badan oo wax soo saarka cilmi-baarista ee qaaradda
Ku dar tirokoobyo ku saabsan
Wax-soo-saarka cilmi-baarista ee lagu daboolay joornaalada caalamiga ah?
Wax soo saarka cilmi-baarista Afrika guud ahaan?
Shabakad ka wanaagsan oo wada-shaqeyn dhexmara
Waxaan rajeyneynaa in saynisyahannada Afrikaanka ah ay aad uga warqabaan midba midka kale natiijooyinka cilmi-baarista, gaar ahaan isku xirka farqiga u dhexeeya bulshooyinka sayniska Faransiiska iyo anglophone ee qaaradda. Waxaan ku dhiirigelinaynaa qorayaasha inay ku bixiyaan koobid gaaban oo Faransiis ama Ingiriis ah.
AfricArxiv waxay bixin doontaa goobta raadinta istiraatiijiyadeed ee la-hawlgalayaasha iskaashiga gudaha Afrika iyo qaaradaha oo dhan.
Sidee loo abuuray AfricaArxiv?
Fikirkii baa soo baxay AfricaOSH iyada oo loo marayo Twitter. Furan Qaabdhismeedka Sayniska waxa ay bixinaysaa kaabayaasha dadaal ay bulshadu hogaamiso, kaas oo yaraynaya kharashka iyo kakanaanta una ogolaanaya in diirada la saaro waxbarashada ku saabsan diyaarinta iyo horumarinta AfrikaArXiv.
Waxaan la xiriirnaa saynisyahano Afrikaan ah oo shakhsi ah si ay u soo kabtaan fikradaha oo ay u horumariyaan fikradda oo ay u gudbiyaan saynisyahannada si ay ugu lug yeeshaan qorista soo gudbinta (kooxda PR), dhexdhexaadinta, guddiga la-talinta guddiga hogaaminta.
Halkan ka akhri war-saxaafadeedka AfrikaArxiv ee soo saaray: https://cos.io/about/news/center-open-science-and-africarxiv-launch-branded-preprint-service
Sidee loo maareeyaa AfrikaArxiv?
Waxaan leenahay koox ka shaqeysa oo isku dubbarida hawlaha meel fog online ah. Soo gudbinta ka dib, laba ama in ka badan oo dhexdhexaadiye ah ayaa hubin doona maqaallada saxnaanta iyo khusaynta.
Yaa daboolaya kharashaadka maaraynta AfrikaArxiv?
Ma jiraan kharashyo dhab ah/maaliyeed oo muhiim ah oo ku lug leh (marka laga reebo iibsashada domainka iyo waqtiga) - dhammaan dadaallada iyo wada shaqaynta kooxeedku waxay ku saleysan yihiin aasaas ikhtiyaari ah horumarinta iyo kala-duwanaanta sayniska.
Kaabayaasha dhaqaalaha lagu bixiyo OSF, Kaas oo ay soo saartay Xarunta Sayniska Furan, oo aan faa'iido doon ahayn oo dhista kaabayaasha alaabada dadweynaha ee socodka shaqada cilmi baarista oo ay kabto dadaallada badan ee ay bulshadu hormuudka ka tahay ee loogu talagalay in lagu kordhiyo dhaqamada Sayniska Furan.
Sidee bay saynisyahannada Afrika u isticmaali karaan AfrikaArxiv?
Saynisyahanada Afrikaanka ah waxay soo gelin karaan labadaba daabacaad iyo daabacaadyo dambe iyo sidoo kale natiijooyin taban, kood, xog-ururin, qoraallo, iyo aqoon dhaqameed halka lagu dabaqi karo oo waafaqsan QODOBKA 31 AAD UNDRIP.
Waxa kale oo ay ka baadhi karaan kaydka si ay u ogaadaan waxa saynisyahannada kale ee qaaradda ay ka samaynayaan cilmi-baadhistooda.
Waxaan soo dhawaynaynaa soo gudbinta Ingiriisida, Faransiiska iyo Bortuqiiskuba iyo sidoo kale luuqadaha maxaliga ah ee Afrikaanka ah sida Akan, Twi, Swahili, Zulu, … waxaanan dhisaynaa koox tafatirayaal ah oo tafatir kara soo gudbintaas. Inta badan way fududahay in lagu qeexo shaqadaada afkaaga hooyo. Maadaama saynisyahano badan oo Afrikaan ah ay afaf badan ku hadlaan hadhow u soo gudbinta facooda joornaal dib loo eegay oo Faransiis ama Ingiriisi dhib badan ma noqon doonto.
Saynis yahanada Afrikaanka ah ee raba in ay ku wadaagaan qoraaladooda AfricArxiv ama meel kale oo daabic ah waa in ay hubiyaan ka hor, haddii joornaalka ay qorsheynayaan in ay ku daabacaan uu waafaqsan yahay daabacaadda qoraal-gacmeedka ee kaydka preprint. Inta badan joornaalada akadeemiyada waxay aqbaleen daabacaado horay loo daabacay. Waxaan kugula talineynaa inaad hubiso SHERPA / RoMEO adeega faahfaahinta ama siyaasada wadaaga maqaalka joornaalka.
Waa maxay shuruudaha aqbalaadda?
Qabyo-qoraalka Siyaasadda: Soo-gudbintu waa in ay la kulmaan heer tayo leh oo waafaqaan guud ahaan dhaqamada sayniska ee wanaagsan iyo mabaadi'da sayniska furan.
Tilmaamaha gudbinta in si fiican loo habeeyo labada toddobaad ee soo socda si dhow loola wadaago saynisyahano kale oo Afrikaan ah. Waxaan dhisi doonaa bulsho xoogan oo ku wareegsan beesha isteerinka waxaanan sii wadi doonaa la tashigooda si ay si joogto ah u wanaajiyaan una qeexaan goobta shuruudaha gaarka ah ee macnaha guud ee cilmi baarista Afrika.
Sidee xog dheeri ah loogu dari karaa?
Qoraal gacmeed kasta waxaad ku dari kartaa kaabayaasha qaab kasta oo leh kaydin aan xadidnayn. Kaliya dhagsii, oo jiid oo tuur ama dooro faylasha mashruuc kasta. Waxaad sidoo kale ka mid noqon kartaa adeegyada kale sida Figshare, Dropbox, ama GitHub. Halkan ka eeg tusaale ahaan https://osf.io/nuhqx/.
Sideen u cusboonaysiin karaa nooca qoraal-gacmeedka?
Si aad u saxdo mid ka mid ah qoraaladaada hore ee la aqbalay, waxaad ku cusboonaysiin kartaa gelitaanka DOI oo wata nooc cusub oo qoraal-gacmeedka maqaalka adigoo isticmaalaya akoonkaaga.
Waxa kale oo aad awood u yeelan kartaa inaad si fudud ugu darto maqaalka DOI ee asaagii dib loo eegay nooca hadda ee preprint.
- sida taas loogu sameeyo OSF: caawin.osf.io/hc/en-us/articles/360019930573-Edit-Your-Preprint<
Shaqadayda ma ku daabici karaa joornaal ka duwan ka dib markaan la wadaago qoraalkayga hore ee AfrikaArXiv?
AfricArXiv iyo aaladaha aan shuraakada nahay waa goob kayd ah oo daabacan oo furan si aad annaga nala wadaagto shaqadayada sida cagaarka Galitaanka Furan (is-archiving). Markaa haa waxaad u soo gudbin kartaa qoraal-gacmeedyadaada joornaal.
Waxaan soo jeedineynaa in la raadiyo https://www.ajol.info/index.php/ajol iyo https://doaj.org/ si aad u hesho joornaal la aamini karo si aad shaqadaada ugu daabacdo qiimo jaban oo dib u habayn qoraaleed (APCs).
Waxaa suuro galiyay HTML5 FAQ ka jawaabaya
Ma haysaa su'aalo dheeraad ah? Noogu soo dir emailka at info@africarxiv.org